Euractiv, Financial Times, Politico Europe agwaghị ỌZỌ ọzọ na Akwụkwọ Ozi Mepere emepe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Euractiv, Financial Times, Politico Europe agwaghị ỌZỌ ọzọ na Akwụkwọ Ozi Mepere emepe
Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Prọfesọ Geoffrey Lipman, onye isi oche nke International Travel Climate Friendly Community (ICTP) na Juergen Steinmetz, onye isi oche nke World Tourism Network toro òtù 16 nke Europe maka ịjụ itinye aka na mmemme na ihe omume Europe nke akwụkwọ ndị na -akwado n'ihu ọha na -akwado mmanụ ọkụ.
Ndị otu 16 na -ahụ maka ime obodo kwuru na ha agaghịzi anabata oku a kpọrọ ikwu okwu na mmemme mgbasa ozi na amụma EU nke ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ na -akwado.
Ha kwupụtara nke a n'akwụkwọ ozi mepere emepe nye ndị editọ akụkọ akụkọ Europe atọ, Euractiv, Financial Times na Politico Europe.
Akwụkwọ ozi a na -agụ: Sir / Madam, Dị ka ndị na -eme mkpọsa na Europe maka ime ihu igwe na ikpe ziri ezi ihu igwe, anyị na -edetara gị akwụkwọ ozi iji gwa gị na anyị agaghị anabatakwa akwụkwọ ịkpọ oku ikwu okwu na mmemme nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị haziri na amụma EU na nkwado nke fossil. ụlọ ọrụ mmanụ ụgbọala.
Maka ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ, dị ka ụlọ ọrụ ụtaba bu ya ụzọ, onyonyo bụ ihe niile. Ịhụ dị ka ezigbo onye mmekọ na akụkụ nke ihe ngwọta maka nsogbu ihu igwe bụ isi. Site n'ịkwado mmemme dị elu nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi haziri dịka nke gị, ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ na-azụta ikpo okwu iji nweta ntụkwasị obi na mmetụta adịghị mma.
N'ime oge mgbasa ozi na -agbasa na mgbasa ozi mmekọrịta, yana mgbe mgbasa ozi na ọdịnaya nchịkọta akụkọ na -esiwanye ike ịmata ọdịiche, anyị kwenyesiri ike na mgbasa ozi n'efu nwere ọrụ dị mkpa ọ ga -arụ iji kwado ọchịchị onye kwuo uche ya na ikwu okwu efu.
Agbanyeghị, ịchụso ebumnobi anaghị arụ ọrụ site n'ikwe ka ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ na -akwado usoro mgbasa ozi. Ọrụ na -aga n'ihu nke icheku ọkụ, mmanụ na gas na -eme ka nsogbu ihu igwe ngwa ngwa na imebi ihe ihu igwe abụghị echiche, na ikwe ka ụlọ ọrụ ahụ nọgide na -eme mkparịta ụka ahụ nwere ike inye aka gbuo oge ngwa ngwa dị mkpa iji belata ikpo ọkụ zuru ụwa ọnụ. ọdịdị dị larịị na ọha mmadụ nwere ike iguzogide.
N'okwu ọtụtụ nde ụmụ akwụkwọ na-emetụta ihu igwe: ụlọ anyị na-agba ọkụ.
Na ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ nwere mmanụ ọkụ n'aka ya. Mgbe ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ na-eji ntụkwasị obi nke usoro mgbasa ozi gị dị ka akụkụ nke atụmatụ ịtọpụta usoro arụmụka ọha na idobe onwe ha nso ndị na-eme mkpebi, ị na-enyere ha aka ịwụnye mmanụ ọkụ.
Anyị ga -enwe ekele maka ibipụta akwụkwọ ozi a ka e wee mara ndị na -agụ gị na ndị sonyere na mmemme maka ihe kpatara otu anyị anaghị anọ na mmemme ọ bụla ị nwere ike ịhazi site na nkwado nke ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ. Anyị na -agbakwa gị ume ka ị gaa n'ihu n'idozi nsogbu aghụghọ nke mmetụta mmanụ ọkụ, site na ịhazighị mmemme ọ bụla na nkwado nke ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ.
Onye nke gị,
Ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị efu
Europelọọrụ Europe Observatory
Njikọ nke Federationtù Ndị Ọrụ Ọha na Europe
Ihe oriri na mmiri Action Europe
Enyi nke Earth Europe
Onye Akaebe zuru ụwa
Ndị Naturefriends International
&Gbọ njem na gburugburu ebe obibi
Ntorobịa maka Ihu Igwe
Ụlọ ọrụ amụma WWF Europe